Pakufungisisa pamusoro penhoroondo yekutanga yekucherechedza maziso uye zviitiko zvakasikwa zvakasikwa,yakakura ikava mhizha yakawanda inobata vakawandaminda. Kuti urambe uchinzwisisa kuti chii chinocherechedza maziso, zvose pamusoro pazvo zvinofanira kutangarinotsanangurwa.
Julia Vashneva, Mutungamiri Wekubudirira Kwekambani Semalt DigitalNheyo, inopa ruzivo rwezvinoitika maitiro ekutsvaga maziso ekutsvaga maziso kutora pane unyanzvi uye ruzivo rwakawandayekubatanidzwa ne CoolTool , kambani yekutsvakurudza yemari.
Kuona maziso kunogona kurondedzerwa sekusanganiswa kwedata data. Iyo data yakaunganakuburikidza nemasikirwo asina-intrusive akadai sekure kure kana kumusoro-kutarisa maziso. Theiyo isina-intrusive device inoshandisa kamera pamwe ne-infrared light source. Thechitubu chechiedza chinotungamirirwa kune ziso semakera emakera uye zvinyorwa zvesezvikamu (e.g., mudzidzi kupenya, kubhururuka kunowanzo, kushambadzira kwemhepo). The aggregateddata inogadzirwa nemeso-tracking analysis software nemigumisiro yakaongororwa.
Ziso rekuona maziso ikozvino riri kushandiswa mukutengeserana kwevatengi uye kugoveratsvakurudzo, zvidzidzo, zvechiremba uye mufambiro wepfungwa dzepfungwa, pamwe chete nevanhuzvikonzero zvijeni uye kutamba kuenzanisa nekutsvakurudza uye kushandisa. Sevatsvakurudzitsvaga nzira itsva dzekushandiswa kwekucherechedza maziso, munda unowedzera zvinoshamisa.Kunyange mauto akashandisa zvikwata zvekutsvaga maziso zvevarwi vemauto vari muhondo dzavozvinyorwa-musoro musoro-up zvinoratidza (HUDs) zvekushandisa mano.
Paunenge uchikurukurirana nezvekucherechedza maziso, zvakakosha kunzwisisa zvese zvinokoshamhando dzekufamba kwemaziso iyo ndiyo nheyo yekuona teknolojia yekuona maziso iyo inosanganisira:
Saccades..Inofungidzirwa sekufambisa kwakakurumidza kweziso rinoshanduka pakarepochinangwa chokugadzirisa. Inogona kunge iri kufamba shoma panguva yekuverenga kana kufamba kukuruapo pachitarisa kumativi ose muimba. Kazhinji, ivo vanofungidzira mune zvisikwa, asiinogonawo kubvunzwa nemwoyo wose. Yakawanda inowanzoonekwa yeascladic eye maitiro anoitika panguvamunhu akarara.
Smooth Pursuit Movements. Inononoka kupfuura dzimwe nzira dzekufamba kweziso, iyo SmoothKutsvaka Movement inzira yekuzvidira inofadza ye fovea (chikamu chiduku cheiyo retina umo maonero anooneka ari akakwirira). Munhu wacho ane kodzeroUnyanzvi hwekuona kana kuregeredza zvinokonzera. Kune vamwe vanhu vakadzidziswaavo vanogona kuita shanho rinotsvaga kutevera kunze kwekuvapo kwechinhu chinokanganisa (chinotamira chinangwa).
Vergence Movements. Kusiyana nedzimwe mhando dzekutama kweziso, asi maziso ese anotamiramutungamiri iwoyo, kufamba kweruzhinji kunopesana. Mitsara yekuona kweumwe neumweziso rinogona kuona chinhu chinenge chiri pedyo kana chiri kure. The pupillaryIzvozvo zvinowedzera munda wekunzwisisa uye unowedzera mufananidzo we fovea (retina).
Vestibulo-ocular Movements. Kubhadhara musoro wekutungamirira, vestibulo-ocularkufamba kweziso kunobatsira kugadzirisa zviratidzo zvinoonekwa zvekunze kwekunze. The retinalnzvimbo yepamusoro inokonzera chimiro "kusvetuka" nekuona kuchinja kwechinguva (mutungamiri wemusoro)nokudaro kugadzirisa kuburikidza nekugadzirisa kufamba kweziso. Kugadziriswa kwekubhadhara ndeyeasi kunonoka, pamusana pemafungiro emusoro pamwe nemhinduro yekufunga
Ndiani anoshandisa maziso ekutevera
Zuva rimwe nerimwe, maitiro ekutevera maziso anoshandiswa mukatikugadzira nzira itsva. Apo mumwe anofunga nezvehuwandu hwemunhu anoshandisa maziso zuva rega rega, hazvishamisikuti ruzivo rwaunounganidza runobatsira kumativi ose emhizha. Imwe yakadaro iyo indasitiri inotsvakurudza misika.Mashoko aya akaunganidzwa kubva kutsvaga kutsvakurudza maziso akashandiswa pakugadzira mapuranga pamwe chete nezviziviso.
Mitambo yemitambo yakashandisa teknolojia yekutsvaga maziso semucheto wokuvandudzamutambi wemutambo kuburikidza nekubatanidza biomechanical, muviri uye tsikadheta kuti ipe chiyero chekuyera kune mumwe munhu kubudirira. Maitiro uye neuroscience vadzidzisi vave vachishandisa teknolojia yekucherechedza mazisomukuongorora kwavo unyanzvi hwekuverenga, dyslexia, motokari yekushanda, pamwe nekuongororauye kushandiswa kwechifananidzo. Nokushandiswa kwekrini-based visual visual stimulation uye musoro kufambamahwindo ekutsvaga rusununguko, vatsvakurudzi vakawana nzira itsva dzekuyera nekuongorora uyekukanganisa motokari mabasa pamwe nekushandisa nzira dzakanaka dzekugadzirisa kukanganisa kwevanhu.
Nzvimbo itsva yekutsvaga maziso ndeyekutsvakurudza-kutarisa. Vatsvakurudzi vave vachiri kuwedzerazvishandiso zvinogona kuguma kuchinja kusangana pakati pevanhu nekombiyuta. Thekutsvakurudza kuri kutarisa kushandisa maziso ekudzivirira kombiyuta yetsuko..Panzvimbo yeuchishandisa mouse, mufaro unonamatira kana kunyora tablet, mushumiri achadzidzira makombiyuta maitirokuburikidza nekufamba kweziso uye kubwinya.
Zvakananga kuti kutevera maziso kunobatsira sei mutungamiri anowanzogona kutsanangurwa mukatikwete-so-simple terms. Kuchengeta maziso kubvira pakutanga kwaro kwave kushandiswa kuperauye kuongorora zvinoonekwa nomunhu. Kune nzira dzakasiyana siyana dzekucherechedza zvakadai, asi inowanikwa ndeye nzira isiri intrusive.
Kwete-Intrusive Remote Eye Tracking
Izvo-zvisingatarisirwi maziso ekutsvaga maziso ekutanga ndeye mudzidzi wepachikoro cornealkufungidzira (PCCR). Izwi iri rinoshandisa nzvimbo iri kure iri chiedza kuti rivhenekereziso, iyo mukati inokonzera kufungidzirwa uye inobvumira kamera yekurekora systemkubata imaging data. Mifananidzo yakatorwa padhidhiyo yekurekora (kamera) inoratidzazviratidzo zvakasiyana-siyana pakati pevadzidzi vanofungidzira uye cornea. Rimwe ruzivoiyo inotorwa angled vector calculation tafura inoshandiswa kuumba chaiyo geometricalkufungisisa zvinhu zvinoumba hwaro hwekutarisa mutungamiri.
Zvichienderana neziso rekuona ziso rinoshandiswa, iro rinotarisa kuverengainobvumira zvakasiyana-siyana zvekufananidzira-kugadzirisa maitiro ezvo pamwe nehutatu hwemaziso ezisomaererano nechinangwa chekutarira. Muchidimbu zvinyorwa zvisiri nyore, iyo inotora zvinyorwamaziso eziso reziso, kuongorora maziso ekutarira maziso, inotarisa pane pfungwayekucherechedza zviyero, uye inoumba kuunganidza kwe data iyo kana kuongororwa inopaiyo yakagadzirirwa kushandiswa kwemhando yedhimwe data nemigumisiro. Migumisiro inogona kuyerachero chinhu chinoita kuti mushandi arambe achicherechedza, kugadzirisa pane chimwe chinhu. Totsanangura zvakajeka, muenzaniso wekuita ndeyotevera:
Muongorori weziso anodikanwa kuona mifananidzo chaiyo pamakombiyuta(e.g., chigadzirwa chemusika). Pane mifananidzo yakafanana yechigadzirwa papakombiyuta pane zvakasiyana-siyana (ruvara, ukuru, nezvimwe) Mutsvakurudziunoda kuziva kuti ndeipi yemifananidzo iyo inoshandiswa nemakombiyuta (iyo inkutendeuka kuchakwanisa kuziva kuti chipi chigadzirwa chemufananidzo chinonakidzakumushandi). Ziso rinotevedzera maitiro ehurongwa rinosanganisira kurekodi system,purojekiti uye mhando dzakasiyana-siyana dzakagadziriswa. Pakutanga, purojekiti inosikachine chiedza chechiedza chemaziso. Zvadaro, iyo kukora kamera inotoraMulti-high-frame-rate mifananidzo yeziso romushandisi (ie, iyo yeiiyo mifananidzo iri pachivharo mushumiri anotarisa pa).
Kugadzirwa kwekufungidzira kugadziriswa (kunyanya, software yekutsvaga maziso chaiyokumufananidzo unocherechedza) tsanangudzo yakajeka yeziso romunhu uye kuratidzamaitiro. Pakupedzisira, zvichibva pane zvakaunganidzwa zvekufungidzira zvinyorwaanoverenga maziso 'maonero uye kutarisa pfungwa. Iyi deta inodudzirwa zvakaresokuti ndeipi yemifananidzo iri pamakombiyuta iyo user yave yakarongacherechedza (saka muongorori anokwanisa kuziva kuti ndeipi yezvinhu zvinotengesarimwe boka remagetsi rekushandisa rakarisa pamusoro).
Sezvo munda wekombiyuta yekucherechedza maziso ichiwedzera kune dzimwe nzvimbo, mibvunzo inosvikasekubudirira kwayo pamwe nekunetseka pakutsvaga data yakarurama. Pane zvakadarokunetseka ndechokuti kumira kunobata migumisiro yekuona maziso..Sekuvhenekera kwevanhumaziso chinhu chisingazviiti, kazhinji hachigoni kudzorwa. Nezvokuti kuoneka kweziso, kumira kunenge kuchivhara maoyelid uye cornea apo mazhizhainopfiga. Sezvo cornea reflection data yakakosha mukuona maziso ekuunganidza,munguva yekupedzisira mhinduro kuongorora izvo zvisina kukwana deta zvinyorwa zvinosanganiswa nezvichida kuwedzera kwebhuku kana kushandiswa kwechando nema software software yekuona.Kunyange zvazvo ruzivo rwekuwedzerwa ruzivo rusingasviki 100% rwunovhara zvakakwana kuti rure ruzivo rwakarurama rwekutsvaga.
Chimwezve mubvunzo unomuka pamusoro pekuti kana kutungamira kwemaziso kunobata maziso ekuteverazvinoguma? Mutungamiri wemutambo panguva yechirongwa chekucherechedza maziso chimwe chezvinhu izvoinogona kukonzera migumisiro sezvo inogona kunge yakagadzirisa zvakakwana pakururama kwekutariradata. Mukugadzirisa chinetso chekutungamira musoro, multiple optical sensors uyeDhiyabhorosi kuunganidza makamera inowanikwa mukati mehutano hwemudzimaimaonero kuitira kuti tive nerudzi rwe "stereo data processing" iyo inowedzerairo rakatarisa rwemaonero. Zvakare, zvakadai kufanana, zisosoftware yekutengesa ichaita sarma iyo ichazofungisisavestibulo-ocular (musoro) kufamba uye kugadzirisa dudziro yekupedzisira kududzira zvakakodzera.Izvo zvisingagoni kugadziriswa mumigumisiro yekupedzisira ndeye kana muchengeti wezisoanoshandura misoro yavo kumativi, masangano okutsanya uye anokurumidza musoro kushanya kanairi kunze kwepamusoro pemagetsi e optical nemakamera.
Paunenge uchikurukura teknolojia yeziso rekuona mubvunzo mumwe chete unowanzoonekwasimuka ukururamisa uye kunyatsogadzirisa maziso ekutsvaga kweziso (opticalsensor, makamera, nezvimwewo) uyewo kududzirwa (data) analysis.Izvo zvinetso zvakatariswa nekambani dzakasiyana-siyana makambani ekutsvaga mazisoavo vakavandudza mitemo yekutarisira kunyatsorurama kwakakwanazvinogoneka. Izwi reMonocular Accuracy rinogona kuedza ziso rimwe nerimwekuronga kuongorora kushanda kwakarurama kwemaziso ega. Kusiyanakune Binocular Yakarurama miedzo iyo panguva imwechete inoedza maziso maviri (kazhinjiinofunga nezvemaitiro anorarama).
Ramangwana rekuona maziso
Tsanangudzo Chikonzero Chinonyatsoratidzika sechikonzero chakanaka chekuedza chinoshandiswasechinhu chekutanga chekuyera kuenzanisa zvimwe zvese zvakarurama. Kururamisira pane zvakanyanyatarisa angles kuongororwa kwemaziso angatarisa iyo inonyanya kukoshakuongorora kweziso. Kunetseka kujekesa kwakarurama ndiyo muedzo unoshandisa vanakujekesa kunyanzvi kusanganisira foreground uye kumashure inversion(kupindira). Kuvhiringidza zvigaro zvepamusoro kutendeseka kunofungamusoro kufamba mumeso ekutsvaga maziso. Chimwe chezvizvi mumwe nomumwemiedzo yekuongorora pamwe chete nemichina yekugadzirisa inoitwakuitira kuti uchengetedze zvizere zvakanyatsoona maziso ekutsvaga maziso.
Kune vakadaro vatsoropodzi vane dambudziko iro kutevera maziso kwakaruramainoyevedza teknolojia. Vatsoropodzi vatya kutya kuti teknolojia inokwanisakushandiswa zvisina kunaka uye / kana zviitiko zvekuedzwa kusanzwisiswa. Sezvo teknolojiayakanyanya kuwedzerwa uye zvigumisiro zvinotsanangurwa, iVatsoropodzi vanoita sevari vashoma uye vari pakati. Teknolojia yekutsvaga maziso yakave irivaisangana kuona kukuvadzwa kwehuropi nemakwikwi, mune dzidzo kune avo vanekuverenga nekuremara uye munharaunda yese inogona kuitika.
Remangwana re teknolojia yekutsvaga ziso rinenge ratove riri pano..Cellularfoni yekutarisa teknolojia teknolojia yatotanga. The Samsung Corporationyakagadzirisa rwonzi rwemafoni runomira purogiramu inotarisana nevhidhiyoapo munhu anoshandisa akatarisa kure. Samsung nemamwe makambani efoni fonikuunza biometric iris kuziva mafoni achazarura panekushandiswa kutarisa mukati memutambo foni.
Indasitiri yekumotokari yave ichivandudza zisokutevera kutarisa zvirongwa zvinogona kuona kana mutyairi ari kunonokanokudaro kuderedza ngozi. Saizvozvowo, motokari dzemangwana dzinogona kunge dzakagadzirwa nezisomaitiro ekucherechedza zvigadzirwa zvinogona kugadzirisa mukufambisa maitiro kuburikidza nekuonamutyairi uye nzvimbo dzakapoteredza (mvura inonaya mvura, mazaya echando, nezvimwewo).Kutevera teknoloji yezvese yakave yakataurirwa kunyika yechokwadi chaiyo kutamba.VR mashandisirwo anoshandisa teknolojia iyi kuti iite zvinhu nenzira nekufamba kwemaziso.Mukati mehutano, hutsva hwakagadzirirwa kutarisa maziso huchabvumirachengetedza zviratidzo zvekutanga zvekurohwa kana kugumburwa.
Ikoko zvinetso zvakawanda zvinomira munzira yekombiyuta yekuongorora-mesosezvo inopinda muhupenyu hwezuva nezuva hwehupenyu. Kuchengeta maziso kuonekwasoftware achiripo inofanira kuenzana pachayo kubva paziso iri nyorekufamba (kuvhiringidza vs chinangwa). Zvimwe zvikonzero zvinofanira kutariswainosanganisira kusiyana kwemaonero, kushungurudzwa kwameso uye zvipingamupinyi. Sezisokutsvaga nzira yekuongorora zvinhu zvinoshandisa ruvara rwemukati rwemukati kunemaziso, hakuna kumbove nezvakawanda zvakakwana zvidzidzo pamigumisiro inokuvadza yenguva refu kana kudzokorora.
Somuenzaniso, isu muMesalt Digital Services tiri kushanda pamwe chetethe CoolTool kambani yekutsvakurudza yemari, inopa ziso rakakwanateknoloji yekutsvakurudza pamwe chete nedzimwe nzira dzekutevedzera tsika dzevateererinokuda kwekutsvaga kutsvakurudza kutsvaga. Chaizvoizvo, kambani ino inemutungamiri wakaisvonaka wekutungamira uye zvakanyanya kuda nekuda kwechidoyevateereri kuenda kune teknolojia. Zvechokwadi, kutevera maziso kukubvumira iwekuti uongorore maitiro ezvimwe zvinhu zvekutengesa kwako,iyo inopesana nemafambisirwo emagetsi ekuongorora. Inokonzera akukudzwa kukuru kwekombiyuta yekucherechedza maziso mumunda wekutengesauye izvi zviri kuwedzera.
Mukupedzisa, teknolojia yekuongorora mazisoari pano kuzogara. Inyanzvi iyi iri kuiswa mukati mehupenyu hwedu hwezuva nezuva kuitira kubvuma kwayozvinoita sokuti iri kupararira. Nokukurumidza kana zviitiko uye zvigadziridzo zviri kutora, kutarisa kwezisodzicharamba dzichikwidziridza iyo yekushandisa teknolojia yekugadzirisa mafaira evanhu vakawanda uyekuonekwa kwezvokurapa uye / kana kukanganisika kwepfungwa (uye iyo ichangobva kutanga) Theremangwana rekuona teknolojia yekuisa maziso haisi kungoenderana nemafungiro emuongorori wega,kushandiswa kwaro kunobatsira muupenyu hwedu hakurevi Source .